I-Xiaomi Mi CC9 Pro enekhamera ye-108 MP izakufika ngo-Okthobha 24 | I-Androidsis
I-Xiaomi Mi CC9 Pro enekhamera ye-108 MP izakufika ngo-Okthobha u-24
Yonke into ibonisa ukuba UXiaomi ulungiselela ukumiliselwa okutsha kwiiveki ezimbalwa. Umenzi waseTshayina uya kwenza i-smartphone yakhe yokuqala ngokusemthethweni-kwaye eyokuqala kwintengiso nayo- ngekhamera yesisombululo se-megapixel eyi-108.
Imodeli ekhethiweyo yokuxhobisa inzwa ISOCELL Brigth HMX ngeSamsung, Ngulowo unako ukuthatha iifoto ze-MP ezili-108 kwaye wakhutshwa yi-Samsung phakathi ku-Agasti, yiyo I-Mi CC9 Pro, okona kwahluka kuphezulu kwe I-CC9 yam kunye neCCN yam yenziwa yaseburhulumenteni ngoJulayi njengee-smartphones ezimbini zomsebenzi ophakathi.
Akukho mathandabuzo ukuba iselfowuni yokuqala evela kumenzi waseTshayina onekhamera ye-108 MP yi-Mi CC9 Pro, kodwa nantsi into eqinisekiswa ngumthombo. Ukongeza, ukugqiba ulwazi kunye nokusibeka kubalindi, ucebise ukuba Nge-24 ka-Okthobha njengomhla wokukhutshwa kwesi sixhobo, ekumalunga neeveki ezintathu kuphela ukusuka. Ukongeza koku, umncedisi wongeze ukuba iMi CC9 Pro ekucingelwa ukuba inikwe amandla yiQualcomm's Snapdragon 730G iqonga leselula, elinokufikelela kumaxesha aphezulu e-2.2 GHz.Kwelinye icala, akukho lunye ulwazi olufumanekayo kwiimpawu kwaye Ukucaciswa kobuchwephesha beMi CC9 Pro.
Ukuba yinguqulelo yePro ye-Mi CC9, ifowuni entsha inokuba noyilo olufanayo kule. Yintoni egqithisile, Ndiza kuboleka uninzi lweenkcukacha ezivela kwi-Mi CC9. Yiyo loo nto kusenokwenzeka ukuba ifike ngomboniso wamanzi ongafuniswanga kunye nomfundi ofaka iminwe kuwo. Isenokusebenza kwi-MIUI 9 yamvanje esekwe kwi-OS 11 yePie OS.
Kuba bekusondele ukwenza ukuqala kwayo kwintengiso, kunokwenzeka ukuba kwiintsuku nakwiiveki ezizayo siza kufunda idatha entsha kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi Mi CC9 Pro enekhamera ye-108 MP izakufika ngo-Okthobha u-24
I-Snapdragon 855 Plus kunye ne-64MP Quad Camera ene-20X Hybrid Zoom eqinisekisiweyo yeRealme X2 Pro
Uyifumana kanjani incoko yemiyalezo egcinwe kwiTelegram